Isitiya esifihlakeleyo (Imboniselo yoLwandle) 秘密花园 无敌海景家庭房 - I-Airbnb
Isitiya esifihlakeleyo (Imboniselo yoLwandle) 秘密花园 无敌海景家庭房
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguMimi
UMimi unezimvo eziyi-45 zezinye iindawo.
UMimi ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Njengoko uphuma kwitonela kwindlela yakho yokuya kwiGadi eyimfihlo, uziva ukuba ulishiyile ihlabathi-kunye nawo onke amaxhala alo- emva kwakho. Ayinankathalo ehlabathini njengoko ujonge ezantsi kwindawo entle, engachukunyiswanga yeLau Lau Bay ngasekunene kwakho. Ungene kwindawo enoxolo ebizwa ngokuba yi "Millionaire Acres" ngemibono yayo yezigidi zeedola. Iparadesi yokwenyani emi phezulu ngaphezu kolwandle oluluhlaza okwesibhakabhaka- wamkelekile kwiGadi yakho eyimfihlo.
Yonke into emalunga neGadi eyimfihlo ikuzisa "eParadesi"-imbonakalo yolwandlekazi, iintaka zetropikhi zicula kwaye zidlala emithini, iintyatyambo zetropikhi, iinkwenkwezi eziqaqambileyo zijonge ezantsi kuwe, ngamanye amaxesha iinkwenkwezi ezidubulayo zitsibela esibhakabhakeni esimnyama ebusuku, kunye nesandi sazo zonke. yamaza olwandle aqhekeza ulwalwa olungezantsi kwaye akuphulula ubuthongo obunzulu nobuzolile.
Yiza uhlale nathi eparadesi. Masamkele kwiGadi yaseMfihlo.
Njengoko uphuma kwitonela kwindlela yakho yokuya kwiGadi eyimfihlo, uziva ukuba ulishiyile ihlabathi-kunye nawo onke amaxhala alo- emva kwakho. Ayinankathalo ehlabathini njengoko ujonge ezantsi kwindawo entle, engachukunyiswanga yeLau Lau Bay ngasekunene kwakho. Ungene kwindawo enoxolo ebizwa ngokuba yi "Millionaire Acres" ngemibono yayo yezigidi zeedola. Iparadesi yokwenyani emi phezulu ngaphezu kolwandle oluluhlaza…